Hababka PowerPoint ee ugu Fiican Waxbarashada | Madasha Mobile -ka
Hababka PowerPoint ee ugu Fiican Waxbarashada
Eder Ferreno | 13/10/2021 11:00 | Microsoft PowerPoint, Qalabka otomaatiga
PowerPoint waa aalad sii wadata inay muhiimad weyn u leedahay waxbarashada. Waa caadi in soo bandhigid lagu sameeyo aaladdan si loogu soo bandhigo mawduuc, ha ahaado macallinka sameeya bandhig -sawir -qaade ama haddii aad rabto inaad soo bandhigto shaqo aad samaysay. Ma aha wax la yaab leh sidaa darteed isticmaaleyaal badan raadi hababka PowerPoint ee waxbarashada in ay u adeegsan karaan bandhigyadooda.
Haddii aad raadinaysay qaabab PowerPoint cusub oo waxbarasho ah, waxaan hoos kuugu reebnay xulashada kuwa ugu fiican. Ka sokow inaan kuu sheego sida aad u soo dejisan karto, si ay kuu suurta gasho inaad ku abuurto bandhiggaas barnaamijka caanka ah ee xafiiska Microsoft. Hadday tahay macallin ahaan ama arday ahaan, qaab -dhismeedyadan ayaa ku caawin doona.
Warka fiicani waa in uu jiro a xulasho aad u weyn oo tusaalooyin ah oo hadda diyaar u ah waxbarasho, leh naqshado nooc kasta leh oo la jaanqaada dhammaan noocyada xaaladaha, mawduucyada ama bandhigyada. Markaa waxaan had iyo jeer awoodi doonnaa inaan helno wax ku habboon waxaan u baahan nahay. Sidan, samaynta bandhigga iyadoo la adeegsanayo PowerPoint waxay noqon doontaa mid aad u fudud, iyadoo la helayo xoogaa bogag ah oo soo jiidasho leh ama xiiso leh, kuwaas oo leh naqshad caawisa soo bandhigiddeena, si qof walba u fahmo mawduuca ama u ilaaliyo xiisaha inta uu ku jiro bandhigga.
Markaa waxaan kuugu reebnaa xulashada hababka PowerPoint ee ugu wanaagsan waxbarashada oo aan hadda adeegsan karno, marka lagu daro habka aan uga soo dejisan karno PC -ga. Intaa waxaa dheer, dhammaan qaab -dhismeedyada aan ku tusinno maqaalkan waa lacag la'aan, taas oo shaki la'aan ah wax muhiimad weyn u leh ardayda ay tahay inay soo bandhigaan wax.
1 Naqshad leh nalalka iftiinka midabka leh
2 Template leh sawir farsamo
3 Template leh doodle
4 Template leh wadashaqayn kooxeed
5 Template leh miiska
Naqshad leh nalalka iftiinka midabka leh
Nalalka nalalka waxaa caadi ahaan loo adeegsadaa astaanta xariifka iyo hal -abuurka., wax ka yimaada fikrad wanaagsan. Waxaa jira tibaaxyo ku saabsan arrintan run ahaantii, sidaa darteed iyagu waa xulasho wanaagsan soo bandhigidda kiiskan. Kani waa mid ka mid ah qaab -dhismeedka PowerPoint ee ugu wanaagsan waxbarashada si loogu isticmaalo nalalkaas si madadaalo leh, laakiin waqti aan dheerayn waxay ka weecin doontaa soo -jeedintaas. Nalalkaani waxay ku jiri doonaan mid kasta oo ka mid ah bogagga, laakiin sida aad arki karto, siyaabo kala duwan, si ay si fiican isugu milmaan.
Qaab -dhismeedkani wuxuu leeyahay guud ahaan 25 bogag, kuwaas oo si buuxda wax looga beddeli karo. Tani waxay kuu oggolaan doontaa inaad u habayso sida aad jeceshahay oo aad u baahan tahay mar walba. Waad beddeli kartaa qoraalka, mowqifkiisa ama mowqifka sawirradaas dhibaato la'aan, si ay u noqoto bandhig shaqsiyeed ku habboon mowduucaaga. Intaa waxaa dheer, waxaan si sahal ah ugu dari karnaa garaafyada, wax shaki la'aan muhiim u ah isticmaaleyaal badan.
Mid ka mid ah qaababka ugu xiisaha badan PowerPoint ee waxbarashada. Intaa waxaa dheer, waa la jaan qaada PowerPoint iyo Slides -ka Google, si aad labada qalab midkood u isticmaasho markaad bandhiggaaga fasalka ku samaynayso. Waxaad arki kartaa naqshadeyntiisa, sidoo kale waad sii wadi kartaa soo dejintooda bilaashka ah xiriirkan. Qaab -dhismeed wanaagsan oo lagu xisaabtamo taasina waxay naga tagaysaa naqshad hal -abuur leh.
Template leh sawir farsamo
Kuwa u baahan inay soo bandhigaan mawduucyada sida injineernimada, dhismaha ama barnaamijyada Waxay awoodi doonaan inay isticmaalaan shaxdan. Waa template ah oo aan leenahay qorshe farsamo. Waxay ku daydaa qaababka qorshayaasha mashruuca, marka lagu daro lahaanshaha farta loo adeegsaday sawirrada farsamada ee dhismaha ama warshadaha. Waxay sidoo kale la timaadaa asalka buluugga ah ee caadiga ah, laakiin adeegsadayaashu waxay ku hagaajin karaan sida ay jecel yihiin waqti kasta, maxaa yeelay waxaad beddeli kartaa midabkaas asalka ah si aad ugu habboonaato bandhiggaaga. Mid kale oo ka mid ah qaababka PowerPoint qabow ee waxbarashada.
Qaab -dhismeedkani wuxuu hayaa mawduucan dhammaan bogaggaaga. Bogaggaan, guud ahaan 25, waa la tafatiri karaa mar walba. Waxaa loo oggol yahay in la beddelo midabka isku midka ah, xarafka, farta, cabbirka isku midka ah, iyo sidoo kale sawirrada. Intaa waxaa dheer, waxay la jaan qaadayaan dhammaan noocyada garaafyada ama astaamaha, wax lagama maarmaan u ah soo bandhigidda mowduuc sida injineernimada ama barnaamijka. Intaa waxaa dheer, astaamo badan ayaa la siiyaa adeegsadayaasha, si ay u abuuri karaan qaab -dhismeed aad u dhammaystiran ama soo bandhigid waqti kasta.
Sida tusaalooyinka kale ee PowerPoint ee waxbarashada liiskan, Waxaan uga soo dejisan karnaa kombuyuutarkeena lacag la'aan, waxaa laga heli karaa xiriiriyahan. Qaab -dhismeedkan waxaa loo adeegsan karaa PowerPoint iyo Slides -ka Google labadaba, sidaa darteed macno malahan labada barnaamij midkee ayaa ah midka aad u isticmaasho kiiskaaga. Haddii aad raadinaysay template leh mowduuc si cad loogu waxyooday injineernimada ama dhismaha, waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican ee aad soo dejisan karto.
Template leh doodle
Mid ka mid ah qaababka PowerPoint ee ugu wanaagsan waxbarashada in aan soo dejisan karno waa kan leh doodle. Sida aad ku aragtaan sawirka, waxay leedahay sawirro aad u tiro badan oo leh walxo u eg waxbarashada. Laga soo bilaabo qalimaan, kubbadaha adduunka, buugaag, buugaag xusuus qor, kubbado, qalin iyo qaar kaloo badan. Waa qaab -dhismeed wanaagsan oo la adeegsado haddii ay tahay inaan soo bandhigno mowduucyo loogu talagalay dhagaystayaasha da 'yar, tusaale ahaan, maadaama ay gacan ka geysan doonto soo -bandhigiddaan si aad u sii heli karta dhagaystayaashan.
Sawirada lagu isticmaalay shaxanka waxaa lagu sawiray gacanta. Qaab -dhismeedkaani wuxuu sidoo kale la jaan qaadayaa PowerPoint iyo Slides Google, sida kuwa kale ee aan ku tusnay liiskan. Waxay ku dayataa qoraalo muuqaal ah, sidaa darteed waa kaalmo wanaagsan ardayda inay wax ku bartaan farsamooyinka muuqaalka ah, maadaama ay u oggolaanayso inay sii waddo xiisaha mar walba iyadoo ay ugu wacan tahay adeegsiga midabadaas iyo sawirradaas. Intaa waxaa dheer, waa template la beddeli karo. Waxaan beddeli karnaa midabada waqti kasta, sidaas darteed waxaan abuureynaa soo -bandhig aad u firfircoon.
Dhammaan bogagga ku jira shaxdan PowerPoint waa la tafatiri karaa, si aad wax walba u hagaajin karto iyada oo ku xidhan nooca bandhigga aad samayn doonto. Waa suurtogal in la beddelo midabada, font, iyo sidoo kale soo bandhigidda sawirrada, garaafyada ama noocyada kala duwan ee astaamaha iyada oo aan wax dhibaato ah. Qaab -dhismeed wanaagsan oo waxbarasho oo aad awoodid si lacag la’aan ah uga soo deg linkigan.
Template leh wadashaqayn kooxeed
Waa wax aad u badan in la sameeyo shaqo wadareed kadibna waa inaad soo bandhigtaa waxaad samaysay. Qaab -dhismeedka PowerPoint wuxuu si cad u qabanayaa wada shaqaynta kooxeed ee qaabkeeda. Sidaa darteed waa mid ka mid ah qaab -dhismeedka PowerPoint ee ugu wanaagsan waxbarashada, oo leh naqshad casri ah, muuqaal ahaan xiiso leh oo doonaysa inay ka tarjunto mar walba shaqada ay dadku ka qabteen mashruucan. Intaa waxaa dheer, waxaad u beddeli kartaa midabka asalka ah si fudud, si ay ugu habboon tahay mashruuca su'aasha leh.
Waa template waxoogaa ka casrisan kuwa kale. Waad ku mahadsan tahay tan, kaliya maahan mid ka mid ah qaab -dhismeedka PowerPoint ee aan u adeegsan karno waxbarashada, laakiin xitaa shirkadaha ayaa u adeegsan kara bandhigyada mashruuca. Sida tusaalayaashii kale ee aan soo aragnay, waa la habeyn karaa, si aan ugu hagaajin karno waxyaabaha ku jira si aan u jeclaanno, si ay si wanaagsan u gudbiso farriinta aan rabno. Mar labaad, waxay si buuxda ula jaanqaadaysaa PowerPoint iyo Slides -ka Google.
Marka xigta waa inaad qabataa shaqo wadareed waana lama huraan in la soo bandhigo, qaab -dhismeedkani wuxuu noqon doonaa kaalmo wanaagsan. Waxay leedahay naqshad casri ah, waxay ka caawisaa gudbinta farriintaada waxayna sidoo kale si fiican uga tarjumaysaa wada shaqaynta kooxeed ee la qabtay. Qaabkan PowerPoint ayaa hadda la soo dejisan karaa si bilaash ah linkigan.
Template leh miiska
Qaab -dhismeedka shanaad ee liiska ku jira waa shaxan aan u adeegsan karno xaalado badan. Waxay soo bandhigaysaa naqshad leh desktop dhab ah, oo leh waxyaabo ay ka mid yihiin laptop ama waraaqo iyo walxaha kale ee caadiga ah, tusaale ahaan. Tani waa wax ka caawiya qof kasta oo arka bandhiggaas inuu garto walxaha, iyo sidoo kale hannaanka abuuritaankiisa, tusaale ahaan. Sidoo kale waa mid aad u badan, maadaama aan awoodi doonno inaan u adeegsanno bandhigyada mowduucyo badan oo kala duwan, wax ka caawiya inay ka dhigto mid ku habboon waxbarashada.
Waxaa loo adeegsan karaa soo bandhigid dhammaan heerarka waxbarashada, laakiin sidoo kale haddii aan raadinayno inaan si taabasho badan oo aan rasmi ahayn u siinno hadal, tusaale ahaan, inaan ka dhigno mid aad u dabacsan oo gacan ka geysata ka -qaybgalka dadka ka soo qeybgalaya. Dhammaan walxaha ku jira soo -jeedintaan waa la habeyn karaa, si ay u noqoto mid aad u raaxo leh oo markaa si fiican ugu habboon mowduuca aan ka hadlayno. Adeegsiga garaafyada iyo astaamaha ayaa lagu taageeraa. Intaa waxaa dheer, waxay la jaan qaadi kartaa PowerPoint iyo Slides Google.
Soo dejinta template -kan waxbarashada PowerPoint waa bilaash, waxaa laga heli karaa xiriiriyahan. Waxaad ku haysataa tiro badan oo bogagga ku dhex yaal, markaa waxaad dooran kartaa kuwa aad rabto inaad u adeegsato soo bandhigidda. Ikhtiyaar wanaagsan oo aad u adeegsan karto xaalado badan oo kala duwan, markaa ha ka labalabeyn inaad u adeegsato bandhigyadaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Qalabka otomaatiga » Hababka PowerPoint ee ugu Fiican Waxbarashada
Sidee uga soo dejisan kartaa Telegram taxane bilaash ah